November 18, 2020 - Achawlaymyar
ကောင်မလေး လည်ပင်းက အညိုကွက်က ဘာဖြစ်တာလဲ…?
November 18, 2020 by Achawlaymyar
” သမီး ၊ ဒီကိုလာစမ်း ။ လည်ပင်းက အညိုကွက်က ဘာဖြစ်တာလဲ ”မိခင်မေးလိုက်သည့် စကားကြာင့် မသန္တာစိုး အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားရသည် ။ အသေအချာ ဖုံးကွယ်ထားပါလျက်နှင့် မြင်ဖြစ်အောင်မြင်သေးသည် ။” သမီးလည်း မသိဘူး မေမေ ” ” ဟဲ့ ၊ စန်းတင် ။ စုန်းစုပ်တာနေမှာပေါ့ ”အဘွား ဝင်ပြောလိုက်တာကြောင့် မိခင် မျက်မှောင် တစ်ချက် ကုတ်သွားသည်ကို မြင်လိုက်ရသည် ။ ” ဟုတ် …ဟုတ်မယ် မေမေ ။ စုန်းစုပ်တာဖြစ်မယ် ”” ဒီခေတ်ကြီးမှာ စုန်းတွေ ကဝေတွေ မရှိတော့ဘူး ။ မေမေ့ကို မှန်မှန်ပြောစမ်း ” ” တကယ်ပြောတာပါ မေမေရာ ။ … Read more
လူပျိုကြီး အပျိုကြီးသေဆုံးလျှင် ငှက်ပျောတုန်းထည့်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းမှန်…
ငှက်ပျောတုန်းထည့်ခြင်းအဓိပ္ပါယ် onile ပေါ်မှာ အသက်၈၇ နှစ်အပျိူ ကြီး အခေါင်းထဲငှက်ပျောတုန်းထည့်ခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး ထည့်ရတဲ့အနှစ်အစစ်ကို ပြောချင်လို့ပါ လူပျိုကြီး အပျိုကြီးသေဆုံးခြင်းနှင့် ငှက်ပျောတုံး မည်သို့ ပတ်သတ်ပါသနည်း ..? အားလုံးလိုလို ပြောဆိုစနောက်နေကြတဲ့ ဟာသစကားလေး တစ်ခွန်းကသေရင် ငှက်ပျောတုံးဖက်နေရမယ် နော် ဆိုတဲ့ ကျီစယ်မှုလေးကြောင့် တစ်ယောက်စ တစ်ရာဆိုသလို တစ်ယောက်က စလို့ သူစ ကိုယ်စနဲ့ လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေအတွက် ငှက်ပျောတုံးက စ,စရာတစ်ခု ဖြစ်လာ ခဲ့တာထင်ပါတယ် ။ သာမာန်အမြင်အယူအစအနေနဲ့ ငှက်ပျောတုံးကပဲ သေသူအတွက် အဖော်ဖြစ်စေသလိုလို ၊ ဒီဘဝ အိမ်ထောင် မကျပဲသေသွားရလို့နောက်နောင်ဘဝတွေ အတွက်အိမ်ထောင်ကျအောင်ဓာတ်ရိုက် ဓာတ်ဆင်သဘောနဲ့ ယတြာချေတာလိုလို ဒီလိုပဲ ထင်မြင်နေကြတာပါ ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဒီနေ့လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ မြင်တွေ့နေတဲ့ သေဆုံးသူနဲ့ … Read more
ချမ်းသာကြွယ်ဝချင်တဲ့သူတိုင်း သတိပြုစရာ အမူအကျင့် (၈) မျိုး …
ချမ်းသာကြွယ်ဝချင်တဲ့သူတိုင်း သတိပြုစရာ အမူအကျင့် (၈) မျိုး လူတစ်ချို့ဟာ သုံးမကုန်လောက်အောင် ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့အချိန်မှာ တစ်ချို့ကျတော့ ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင် ဆင်းရဲနေတဲ့အခါ ဒါဟာ မတရားဘူးလို့ ထင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကြားမှာ မတူညီတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံ၊ အမူအကျင့်တွေရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝချင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးလူတွေအကြံပေးထားတဲ့ အရာလေးတွေကို သတိပြုဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်။ (၁) ချမ်းသာမယ့်သူတွေဆိုတာ သူတစ်ပါးကို ပေးကမ်းစွန့်ကြဲဖို့အတွက် မတွန့်တိုတတ်တဲ့သူတွေပါ။ ကိုယ့်မှာရှိတာ နည်းသည်ဖြစ်စေ၊ များသည်ဖြစ်စေ သူတစ်ပါးကို မျှဝေချင်စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ (၂) တစ်ယောက်ယောက်က အကြံပေးစကားပြောတဲ့အခါတွေ၊ သူတို့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို ပြောလာတဲ့အခါမှာ လုံးဝအငြင်းအခုံမလုပ်ပါနဲ့။ သူတို့ပြောတာဟာ သင့်အမြင်နဲ့ ကွဲချင်ကွဲမယ်ဒါပေမယ့် သူတို့ကြည့်တဲ့ရှုထောင့်ကနေ မြင်တတ်အောင် ကြည့်ပါ။ (၃) အတင်းအဖျင်းတွေမပြောပါနဲ့။ အဲ့ဒီ့အစား အကျိုးရှိမယ့် စာတွေဖတ်တာ၊ အကျိုးရှိမယ့်အရာတွေကို … Read more
ဘယ်အရွယ်ရောက်ရင် အချစ်စစ် နဲ့ တွေ့မှာလဲ ကြည့်လိုက်တော့ …
ဘယ်အရွယ်ရောက်ရင် အချစ်စစ် နဲ့ တွေ့မှာလဲ ကြည့်လိုက်တော့ ချစ်ရတဲ့သူတွေ တစ်ယောက်ထက်မက တွေ့ရကောင်း တွေ့ရနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် တစ်ကယ်စစ်မှန်တဲ့ ချစ်သူကိုတော့ ဘယ်အချိန်မှာ တွေ့ရမလဲဆိုတာ ဘယ်အရွယ်ရောက်ရင် အချစ်စစ်နဲ့ တွေ့မှာလဲ အချစ်စစ် ဆိုတာ လူတိုင်းလိုချင်ကြတဲ့ အရာပါ လူတိုင်းလူတိုင်း မက်မောကြပေမယ့် လက်တွေ့ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စကတော့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဘဝတစ်သက်တာမှာ ချစ်ရတဲ့သူတွေ တစ်ယောက်ထက်မက တွေ့ရကောင်း တွေ့ရနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် တစ်ကယ်စစ်မှန်တဲ့ ချစ်သူကိုတော့ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ တွေ့ရမလဲဆိုတာ မသေချာတဲ့အရာပါ။ Marry ရဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက်တော့ ဘယ်အချိန်မှာ အချစ်စစ်နဲ့ တွေ့ရမလဲ ဆိုတဲ့ အချစ်ဗေဒင်လေး တွက်ပေးချင်ပါတယ်။ အချစ်ဗေဒင်လေး တွက်ပေးချင်ပါတယ် မိဿရာသီဖွား – မတ်(၂၁)မှ … Read more
“နှာခေါင်း အမြဲတမ်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူကျပ်နေလျှင် ကြက်ဟင်းခါးရွက်”
“နှာခေါင်း အမြဲတမ်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူကျပ်နေလျှင် ကြက်ဟင်းခါးရွက်” ဒီမနက်ခင်းတော့ နှာခေါင်း အမြဲတမ်း ပိတ်နေပြီး အမြဲလိုလို အသက်ရှူရခက်ခဲလို့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆေးထိုး ၊ ဆေးစား ၊ ဆေးသောက် လုပ်နေရတဲ့ အသိ ညီမလေးတစ်ယောက်နဲ့ စကားစပ်မိရင်း..၊ သူမ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ပြီး သက်သာပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလေးတစ်ခုကို မျှဝေချင်ပါတယ်..။ အဲဒီ ညီမလေးရဲ့ အလုပ်ကလည်း အမြဲတမ်း အအေးပတ်ဖွဲ့ပြီး ရေနဲ့ မဖြစ်မနေ ထိစပ် နေရတဲ့ အလုပ်ကလေးပါ..။ ဆေးနည်းလေးက ကြက်ဟင်းခါးရွက် နှစ်ရွက်ခန့် ကြိတ်ချေပြီး အရည်ရအောင်ယူပါ..။ ထိုအရည်ကို နှာခေါင်းထဲသို့ ထည့်ပြီး ရှူပေးပါ ။ စရှူပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ လည်ချောင်းတစ်လျှောက် နာကျင်သလို ခံစားရပြီး..။ တစ်ခါ နှာခေါင်းထဲမှာ တင်းကြပ် … Read more
ဖုန်းရေစိုတဲ့အခါ လုပ်မိလေ့ရှိတဲ့ အမှားတွေနဲ့၊ တကယ် ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်တွေ …
ဖုန်းရေစိုတဲ့အခါ လုပ်မိလေ့ရှိတဲ့ အမှားတွေနဲ့၊ တကယ် ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်တွေ ဖုန်းရေစိုတယ်ဆိုတာ ဖုန်းနဲ့မကင်းသူတိုင်း ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ မတော်တဆ ရေထဲကို ပြုတ်ကျတဲ့အလေ့အထကို အားလုံးနီးပါး ကြုံခဲ့ရဖူးမှာပါ။ တခါလေ အပြင်ထွက်ရာ ထီးမပါလို့ မိုးရေစိုတာတွေ၊ မိုးရေစင်နိုင်တဲ့နေရာမှာ ဖုန်းကို ထားမိတာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းရေစိုတဲ့အခါမှာ လုပ်မိလေ့ရှိတဲ့ အမှားတွေနဲ့၊ တကယ် ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ရေစိုဖုန်းကို ဆန်ထဲမှာထည့်ထားတာဟာ မှန်သလား – ဆန်ဟာ သာမန်အားဖြင့် ရေငွေ့ကို ဖယ်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာ မှန်သော်လည်း ထင်ထားသလောက် မမြန်ဆန်ပါဘူး။ ဆန်ထဲကိုဖုန်းကို ထားရှိခြင်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးတွေကတော့ ဖုန်းရဲ့အပေါက်မျိုးစုံကနေ ဆန်ရဲ့အမှုန်တွေ၊ ဆန်ကျိုးတွေ ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဖြင့် ဘာလုပ်ရမလဲ …? (၂) အရင်ဆုံး လုပ်ရမှာကတော့ … Read more
စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ရှင်းထုတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၈) ခု
ဆားဝက်ခြံ (blackheads) ဆိုတာ ဘာလဲ? ဆားဝက်ခြံဆိုတာဟာ အဆီများ, အရေပြားဆဲလ်သေများ, ဆံပင်ပေါ်က keratinအလွှာများစသည်တို့က ချွေးပေါက်များအတွင်း သို့ ဝင်ရောက်ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အရေပြားပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆားဝက်ခြံများဟာ မျက်နှာပေါ်တွင်သာမက ကျောဘက်, နားရွက်နှင့် ချွေးပေါက်ရှိသော အခြားနေရာများပေါ်တွင်လဲ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ Skin care အမျိူးမျိူး အသုံးပြုပေမယ့် ဆားဝက်ခြံတွေ ရှိနေသေးတယ် ဆိုသူတွေအတွက် အကုန်အကျသက်သာပြီး လွယ်ကူတဲ့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော် …။ (1) သံပရာသီး” သံပုရာသီးအရည်ဟာ ချွေးပေါက်တွေကို သိသာစွာ ကျဉ်းစေတဲ့အပြင် အသားအရေကိုသဘာဝအတိူင်း သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝက်ခြံပိုးတွေကို သေစေတဲ့အပြင် ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးတာမို့ သံပုရာသီးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကတော့ သံပုရာသီးကိုအရည်ညှစ်ကာ မျကိနှာပေါ်တွင် သုတ်လိမ်းပြီး တစ်ညလုံးထားပါ။ မိုးလင်းတဲ့အခါ ရေကြက်သီးနွေးဖြင် … Read more
၁၈ရကျနတေ့ဈရကျပဲ လုပျလို့ရတဲ့ ၉ရကျအတှငျး ငှသေိသိသာသာဝငျလာစတေဲ့ ယတွာ……
၉ရကျအတှငျး အရောငျးအဝယျတှကေောငျးစပွေီး ငှသေိသိသာသာဝငျလာစတေဲ့ ယတွာ ၁၈ရကျနေ့ မနကျ ၆:၀၀ ကနေ ၉:၀၀ အတှငျး မွတျစှာဘုရားကို အမှေးတိုငျ၅တိုငျကပျလှုပေးပါ အမှေးတိုငျမထှနျးခငျမှာ အမှေးတိုငျကိုလကျနဲ့ကိုငျပွီး သမ်ဗုဒ်ဓဂေါတာ(၇)ခေါကျ ၂၄ပစ်စညျးအကဉျြး(၄)ခေါကျရှတျပါ ရှတျပွီးမှ အမှေးတိုငျကို မွတျစှာဘုရားကိုပူဇျောပါ ဆှမျးနဲ့ကွကျဥမှကွေျော၁လုံးပါကပျလှုပေးပါ ဆုတောငျးရမှာက မွတျစှာဘုရားရဲ့ ကြေးဇူးတျော တနျခိုးတျော မတ်ေတာတရားမြားကွောငျ့ တပညျ့တျော ငှဝေငျစရေနျ အရောငျးအဝယျကောငျးစရေနျအတှကျ ဆုတောငျးပါတယျ တပညျ့တျောမှာ အခတျအခဲမြားရှိရငျလဲ အမွနျဆုံးအဆငျပွရေလိုပါတယျ အရှငျဘုရားဟုဆုတောငျးပါ ဒီစာShareပွီးမှယတွာလုပျပါ မနကျကိုတကျနိုငျရငျစျောစျောထ ရခြေိုးပွီးမှ ယတွာလုပျတာပိုကောငျးပါတယျ ၁၈ရကျနတေ့ဈရကျပဲလုပျရမှာပါ ဆရာတဈပတျတဈခါ တဈရကျတဈခါတငျပေးတဲ့ယတွာတှကေိုသာ မပကျြမကှကျသခြောလိုကျလုပျပါ ကံတကျလာပွီး အစစအရာအရာအဆငျပွလောပါလိမျ့မယျ ငှဝေငျပါလိမျ့မယျ တဈရကျတဈခါ Pageထဲကိုဝငျကွညျ့ပေးပါ ဆရာတငျပေးရငျ မတှလေို့ကျမှာစိုးလို့ပါ ထူးမွတျအောငျ (09760648585) Zawgyi, … Read more